घर » रक्षा » Phineas & Ferb Backyard Defense
खेल जानकारी: Phineas & Ferb Backyard Defense
नियन्त्रण: Use mouse to play Phineas & Ferb Backyard Defense Game.
खेल्नु: 19,464 ट्याग: Phineas & Ferb, Phineas & Ferb games, Phineas Ferb games, Phineas and Ferb games, Phineas games, Ferb games, रक्षा खेल, रक्षा खेल
phineas र ferb जंगल साहसिक
Phineas र Ferb जंगल मा आफ्नो खेल संग सुरक्षित प्ले मद्दत गर्नुहोस्।
phineas र ferb साना राष्ट्र
Phineas र Ferb सार्न र सरल तीर प्रमुख प्रयोग गरेर सबै चीज सङ्कलन गर्न सानो राष्ट्र मा एक साहसिक छ।
phineas र ब्राजील गर्न ferb सडक
Phineas, Ferb र साथीहरूसँग विश्व कप 2014 को स्वागत गर्न दिनुहोस् गरेको खेल फुटबल। सहायता Phineas थप स्कोर प्राप्त गर्न आफ्नो सडक मा सबै बल सङ्कलन।
phineas र ferb CARIBE गर्मी
समुद्रीतट Phineas र Ferb छुट्टी। Phineas, Ferb र इसाबेल्ला बल टस, प्ले इसाबेल्ला भुइँमा बल मारा हुनेछ, Ferb पकड र Phineas गर्न बल पास गर्न छ। तपाईं Ferb नियन्त्रण र सार्न माउस प्रयोग गरेर Phineas गर्न बल पास।
phineas र ferb रकेट पहेली
Phineas र Ferb रकेट पहेली संग रमाइलो छ!
phineas र ferb रोबोट आक्रमण
तपाईं कहाँ छ छोराछोरीको आर्केड खेल केटाहरु को आक्रमण रोबोट पराजित गर्न मदत गर्न। तसर्थ, रंग संग बोर्ड खाली एकै समयमा उनलाई गोली मार
phineas र ferb श्रृंखला प्रतिक्रिया
को बाल्टिन मा संगमरमर प्राप्त गर्न एक श्रृंखला प्रतिक्रिया सिर्जना गर्नुहोस्।
phineas र ferb लात पेरी
यो हास्यास्पद खेल हो। कृपया पेरी टाढा तपाईं थप अंक प्राप्त उड, मदत Ferb पेरी सम्म गर्न सक्छन् तपाईं रूपमा बर्खास्त। को कोण र शक्ति समायोजन गर्न तपाईँको माउस सार्नुहोस्। पन्ट क्लिक गर्नुहोस्! तपाईं cacke जीत मारा हुनुपर्छ। को कुकीहरू सबै हान्न प्रयास गर्नुहोस्! Psst..It गरेको एक सेकेन्ड
phineas र ferb पहेली
तपाईं त Phineas र Ferb पूरा ठूलो तस्वीर भनेर छवि को टुक्रा पल्टाउन तपाईँको माउस प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।